Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo weligii ka soo horjeeday Kenya | Biyoguurenews.com
Home Wararka Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo weligii ka soo horjeeday Kenya
Waxay u egtahay in xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay hayaan jawaabta su’aashaas sida ay iyaga la tahay, waxayna qabaan in la keeno mooshin ka dhan ah ciidammada Kenya ee Soomaaliya ku sugan loo gudbiyo baarlamaanka Soomaaliya, si dalka looga saaro.
Waxaa ka mid ah Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo muddadii uu baarlamaanka ka tirsanaa markasta hor kacayay mooshinno iyo go’aanno ka dhan ah dowladda Kenya iyo ciidankeeda ku sugan Soomaaliya ee ka tirsan AMISOM.
Sida uu BBC Soomaali u sheegay, xildhibaan Daahir wuxuu doonayaa in labada shacab ee Soomaaliya iyo Kenya ay ku wada noolaadaan “si walaaltinimo iyo deris wanaag ah”.
“Shacabka aan matalo Kenya-ba way degaan. Colaad kale oo dheeri ah oo aan u qabo ma jirto, oo aanan ka ahayn in ay xadgudbeyso (Kenya) oo xuquuqdii Soomaalinimada ay ku xadgudbeyso” ayuu yiri Daahir Amiin Jeesow.
Wuxuu tilmaamay inuu jecelyahay in aan la is xumeyn oo deris wanaagga la wada ilaaliyo. “Waxaan nahay dad derisah, waanan ahaan doonaa”, ayuu yirii.
“Waan ku guda jirnaa in uusan hadal keli ah noqon ee sharci ay noqoto. Waxyaabaha qaar ee sababaya in ciidammada Kenya oo qaarkood ay AMISOM ka tirsan yihiin, aan ka maaranno waxa ay tahay; mar haddii iska hor imaadyada faraha badan ee diblumaasiyadeed ee colaadda ay ka muuqato ee Kenya ay u qabto ummadda Soomaaliyeed aan aragnay”, ayuu yiri xildhibaanka.
Wuxuu intaa ku daray in sharci iyo qaraar baarlamaan ay soo saari doonaan. “Waan rajeynayaa in baarlamaanka Soomaaliya ay si aqlabiyad ah ku meel marin doonaan arrintaas”, ayuu sheegay.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa aaminsan in Kenya ay la timid “diblumaasiyad xumo”. Wuxuu sheegay: “Annagoo u aragnay dad deris ah oo aanan kala maarmin ayay Kenya xaaladda uga sii dartay.”
“Arrimihii badda ayey siyaasadeyneysaa oo ay dooneysaa in ay cadaadis ka sameyso, oo shacabka Soomaaliya cadaadis ku saarto. Waxaas oo dhan waan fahansannahay. Anaga waxaan jecelnahay deris wanaagga iyo si sharciga waafaqsan lagu kala baxo”, ayuu yiri Daahir Amiin Jeesow.
Previous articleDAAWO;-Golaha Guurtida Oo Wasiirka Macdanta Iyo Tamarta Waxka ka Waydiiyay Muranka Udhexeeya Shirkadaha Laydhka + Jawaabaha Uu ka Bixiyay.
Next articleWiil Darbijiif Ahaa Oo Si Sahlan Ku Helay Malaayiin Doolar